Degmada Kristinehamn waxaa ku nool dad gaaraya 24 000 waxeeyna ku taal agagaarka balliga ugu weyn ee Iswiidhan ee Vänern ee ku yaal gobolka Värmland. Degmada Kristinehamn waxaa yaal fursado fiican oo dhinaca meela loo damaashaad tago ah, meelo qurux badan oo lagu nasado caruurtana eey ku cayaaraan. Intaas waxaa sii dheer adeega bulshada oo tayadiisu sarreeyso, daryeelka caruurta iyo iskoollka oo fiican iyo dhaqaalaha iyo wax soosaarka degmada oo sii kobcaya. Gacmo furan kusoo dhowoow!
Degmada Kristinehamn waxaa ku yaal guryo dowladeed iyo kuwo gaar looleeyahay labadaba. Shirkadda degmada waxaa la dhahaa Kristinehamnsbostäder. Degmada boggeeda internetka waxaa ka heleysaa warbixin dheeraada oo ku saabsan shirkadaha guryaha ee ka jira Kristinehamn.
Kristinehamn waxaa looga hadlaa luqado kala duwan sida, carabiga, af-soomaaliga, iiraaniga iyo ingiriiska.
Degmada Kristinehamn waxaa ka jira nolol jaaliyadeed aad u heer sarreeysa oo ka shaqeeysa qeybaha hiddaha iyo dhaqanka iyo isboortiska waxeeyna jaaliyadaha ka dhisan degmada gaarayaan 200 oo jaaliyadood, waxaa kaloo sii dheer ururyada iyo kaniisadaha oo iyagana waxyaabo kala duwan qeeybaha kala duwan ee bulshada. Liiska jaalidaha ee degmada waxaad ka heli kartaa taleefannada iyo sida loola xiriiro jaaliyadaha ka jira degmada badankood.
Kristinehamn waxaa tusaale ahaan ku yaal maktabad, xafiiska shaqada, xafiiska ceymiska iyo xafiiska cashuuraha. Waxaa jira dukaamo yaryar iyo kuwo waaweyn iyo dukaamada gacan labaadka iyo suuqyada marmar banaanka lasoo dhigo oo lagu qabto bartamaha degmada ama bannaankeeda.
Carruurta eey waalidiintooda shaqeeyaan, ama waxbartaan waxaa loo diyaariyay xanaano iyo daryeel fiican. Kristinehamn waxaa ku yaal xarumaha xanaanada carruurta oo nuucyo badan leh sida iskoollada xanaanada, guriga xanaanada carruurta, guriga xilli firqaaha carruurta iyo xanaanada guud ee caruurta. Degmada waxaa kaloo ka jira iskoollada xanaanada oo u furan waalidiinta carruurtooda guryaha la joogo. Cunuga iyo waalidka waxeey soo booqanayaan xarunta xanaanada. Gacmo furan kusoo dhowoow mar walba aad rabtid inaad timaatid xarumaheena shaqo.
Degmada Kristinehamn waxaa ku yaal 11 dugiyada hoosedhexe ah kuwaasoo ka bilowda fasalka xanaanada carruurta illaa iyo fasalka sagaalaad. Warbixin dheeraada waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka.
Dugsiyada sare ee degmada Kristinehamn waxuu ka kooban yahay dugsiyada Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet. Dugsiyadaas waxaa lagu bartaa 14 barnaamijyo waxbarashadeed kala duwan ah, waxaa kaloo jira dugsi sare oo loogu tala galay ardayda dhimirka la' oo lagu barto shan barnaamijyo waxbarashadeed kala duwan. Warbixin dheeraada waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka.
Degmada Kristinehamn waxaa yaal fursad aad ku baran kartid luqadda iswiidhishka oo loogu tala galay dadka qaxootiga ah. Waxbarashada waxaa loogu tala galay dadka qaxootiga ah, kana weyn 16 sano isla markaasna ku qoran degmada Kristinehamn, heysanin cilmi dhinaca luqadda iswiidhishka ah. Warbixin dheeraada waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka.
Waxaa jira waxbarasho loogu tala galay dadka waaweyn (komvux), oo lagu baxsho koorsooyin kala duwan iyo waxbarasho dhinaca farsamada gacanta ah. Warbixin dheeraada waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka. Jaamacadda ugu dhow waxeey ku taal degmada Karlstad, waxaana aada gaadiidyo badan oo kuwa safarka ah.
Degmada Kristinehamn waxaa ku yaal rugag caafimaad oo badan iyo dhakhtarka ilkaha. Xarunta daryeelka qoyska ee Källan waa goob eey ku kulmaan dadka waalidiin noqon raba iyo waalidiinta carruurta aadka u yaryar heeysta. Waxaa meeshaas diyaar ku ah qeyb umuliso, qeyb dhalinyarada lagu qaabilo, qeybta la talinta bukaanka, rugta daryeelka carruurta iyo iskool xanaaneed furan.
Degmada Kristinehamn weey heystaan turjubaanno marka loo baahan yahay.
Bas ama tareen ayaad ugu safri kartaa degmada gudaheeda iyo degmooyinka kale ee gobolka Värmland, shirkadda maamusha gaadiidyada safarka waxaa la dhahaa Värmlandstrafik. Shirkadda Värmlandstrafik boggeeda internetka waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah. Bogga internetka ee degmada Kristinehamn waxaad ka heleysaa jadwalka wakhtiyada gaadiidka safarka.
Degmada Kristinehamn waxaa ka jira shirkado badan oo isugu jiro kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar kana shaqeeya meelo kala duwan. Waxaa ka jira ilaa 1500 oo shirkado. Degmada Kristinehamn waxeey o dhowdahay degmooyin badan. Haddii aad rabtid inaad furatid shirkad waxaad talo ku siin kara guddiga wax soosaarka ganacsiga ee degmada Kristinehamn.
Personliga assistenter sökes till barnkund för tjänst om 60 - 80% Personlig assistent
Produktionschef Produktionschef, tillverkning
Idrottsledare i Sweden Sport Academy för Idrottsskolan Knatteskutt Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Laborant i ett banbrytande företag Laborant, kemi
Biomedicinsk analytiker , laboratoriemedicin Kristinehamnsområdet Biomedicinsk analytiker
Begravningsrådgivare till Bolins Begravningsbyrå Kristinehamn Begravningsrådgivare
Produktionstekniker sökes till expansiv verkstadsindustri Produktionsingenjör, textil, trä, glas, förpackn
Sjuksköterska , närvårdsavdelning 85 , Kristinehamn Sjuksköterska, grundutbildad
Säljare till Kristinehamn Eventsäljare/Eventförsäljare
Är Du vår nya medarbetare? Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Vik. Brevbärare , Kristinehamn Brevbärare
kund och personalansvarig koordinator Socionom
Butikschef Stora Coop Butikschef
Arbetshandledare Camp Nova Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Lärare i fritidshem alt. Förskollärare till Djurgårdsskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Bogga 1 ee ka mid ah 23
ca 24 000
1 392 km2
Karlstad 44 km
Örebro 71 km
Göteborg 249 km
Oslo 260 km
Stockholm 269 km